एनआरएन अमेरिकालाई जिताउने हो भने...
विगत दुई वर्षदेखि लगातार रुपमा एनआरएन यूएसएलाई सबै प्रवासी नेपालीहरुको साझा संगठन बनाउन एनआरएनको सुदृढीकरण अभियानमा होमिए पनि आज एनआरएनको हार हुँदैछ भन्न बाध्य भएको छु। दुई वर्षभित्र हामीले कुनै जीत नै हासिल नगरेको पनि होइन। सबैको साथ लिएर फेरि पनि एनआरएनलाई विजयी बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। एनआरएन किन हार्दैछ भन्नुभन्दा अगाडि हामीले हासिल गरेका केही जीतहरुलाई केलाउन चाहन्छुः
१) न्यूयोर्कको गणेश मन्दिरमा भएको बिशेष साधारण सभाबाट, साधारण सदस्यहरुको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजिएको थियो। तर त्यस साधारण सभाबाट नै सबै सदस्यहरुले उठ्न पाउने विधान हामीले
लेख्न सफल भएका थियौं।
२) निर्वाचनको नतिजा सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुले आफूले कहाँबाट कति मत प्राप्त गर्यो भनेर हेर्ने अधिकार स्थापित भएको छ। विगतको निर्वाचनको नतिजा हेर्न तपाईंहरुको साथ र सहयोग लिएर करिब दुई वर्षसम्म टेनिसीको अदालतमा लडाइँ
गरेको यहाँहरुलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। अन्तमा गएर वर्तमान कार्य समितिले चुनावी डाटा अदालतमा बुझाएको व्यहोरा पनि यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु।
३) सो डाटाबाट के प्रष्ट भएको छ भने, ३० वटा कम्प्युटरबाट करिब ३,००० मत खसेको थियो। त्यसताका कुनै निर्वाचन बुथ वा केन्द्र स्थापना गरिएको थिएन। न त सदस्यहरु एकै ठाउँमा भेला भएर नै मतदान गरेका थिए। यसले गर्दा विगतको निर्वाचनमा केही अनियमितता पक्कै भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अदालतमा डाटा बुझाए पश्चात अबको निर्वाचनमा यस्ता कुकार्य दोहोरिने छैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो दोस्रो जित हो। साथै, निर्वाचन आयोगले चुनाव अगाबै एउटा कम्प्युटरले कसले र कति जनाले भोट हाल्न पाउँछ भन्ने नियम ल्याउने छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास छु।
४) सदस्यता छानबिनको क्रममा छानबिन कमिटिमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा यसका भातृसंगठनमा पदासिन
व्यक्तिहरुलाई राख्न पाइन्न भनेर न्यायिक कमिटिमा हामीले दिएको उजुरीको सुनुवाइका साथै हाम्रो पक्षमा निर्णय भएको छ। त्यसको सहीरुपमा पालना भने यसपालि गरिएको पाइएन। तर पनि भविष्यको लागि नजिर भने पक्कै स्थापित भएको छ। भविष्यमा एनआरएनलाई प्रत्यक्ष राजनीति हाबी हुनबाट जोगाउन योगदान मिल्नेछ।
५) सदस्यता वितरणको समयावधि बढाउन हुँदैन भनी दिइएको उजुरीमा पनि हाम्रै पक्षमा निर्णय भएको छ। तर पनि स्वतन्त्र न्यायिक समिति, स्वतन्त्र निर्वाचन समिति र स्वतन्त्र सदस्यता वितरण समिति बनाउने लगायत कसरी सदस्यता प्रमाणित गरिएको छ भन्ने कुरा हेर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था हुने सर्तमा सो उजुरी झिकिएको छ। केहि हदसम्म भए पनि फर्जी मतदाताहरु बनाउने काम रोकिएको छ।
६) सदस्यता ग्रहण गर्न परिचयपत्रको अनिवार्यता विधानमै लेखाउन हामी सफल भएका छौं। तर पनि केही षडयन्त्रले गर्दा यसपालिचाहिँ परिचयपत्र नै चाहिने व्यवस्था पालना भएको छैन्। सायद आफ्नै स्वार्थको कारणले होस् अथवा आफैंले पनि फर्जी सदस्यहरु दर्ता गराएकोले पनि होला ६ जना अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरु कसैले पनि विरोध गरिएको पाइनँ। हुन त अहिले पनि मापदण्ड पुर्‍याएर सदस्यता नबनाइएको भनेर अदालतमा उजुरी गरेको अवस्थामा यो चुनाव नै रोकिन सक्छ।
एनआरएन किन हार्दैछ त?
१) एनआरएनलाई सिण्डिकेट गरिएको छ। हालै मात्र टेक्सासमा सम्पन्न भएको साधारण सभाबाट प्रस्तावित विधानको धारा ११० अन्तर्गत अध्यक्षको उम्मेदवार हुन एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने धारा हटाइए पनि षडयन्त्र गरेर धारा २८ मा विवादित अवस्थामा आइसीसीको विधान लागु हुनेछ भन्ने बुँदा लुकाइएको छ। तर यदि साधारण सभाको मोटिभलाई हेर्ने हो भने सो बुँदा आफै खारेज हुन्छ। दोस्रो कुरा एनआरएन अमेरिका, अमेरिकामा दर्ता भएको ५०१ सी संस्था हो। ५०१ सी अनुसार कुनै पनि विदेशी संस्थाको विधान मान्नु पर्ने भन्ने छैन तर सम्बन्धन हुन सकिन्छ। यदि आइसीसीको विधान नमानेको अवस्थामा हुने सबै भन्दा ठूलो कारबाही भनेको आइसीसीले सम्बन्धनमुक्त गर्ने हो जुन आइसीसीले कदापि गर्दैन र गर्ने हिम्मत पनि गर्दैन। किनभनेः
– एनआरएन अमेरिका सबै भन्दा ठूलो संस्था हो। जसबाट आइसीसीले माग गरेको प्रति सदस्य १० डलर पठाउँदा पनि सदस्यता शुल्कबापत १,७०,००० डलर आइसीसीको ढुकुटिमा जान्छ।
–आइसीसी सदस्य शुल्कबापत आठ जना सदस्यको प्रतिव्यक्ति २००० डलरको दरले १६००० डलर ढुकुटिमा जान्छ।
–आइसीसी डेलिगेटसमार्फत अमेरिकाबाट सहभागी हुन पाउने करिब १८० जना को दर्ता शुल्क १८००० डलर पनि आइसीसीको ढुकुटीमा जम्मा हुनेछ।
माथिका तीन शीर्षकबाट मात्रै करिब २०४,००० डलर अर्थात् करिब २ करोड १० लाख नेपाली रुपैयाँ आइसीसीले गुमाउन चाहन्न।
–यदि सम्बन्धनमुक्त गरि हाले पनि संसदबाट पारित नेपाली राजपत्र २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार एनआरएन अमेरिकाले, परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै एनआरएन दर्ता गर्न सकिन्छ र हाल भएको आइसीसीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी पक्कै हेर्न चाहँदैन।
२) एनआरएनका 'नाराणे अध्यक्ष' पदका प्रत्यासीहरु विभिन्न 'नारायण'हरुका कठपुतली बनेका छन्। साथै कैयन सकुनीहरुको पासाहरु पनि ती उम्मेदवारहरुले बोकेर आफू विजयी हुने अभियानमा लागेका छन्। एकाथरि दुर्योधनहरु माछा मार्ने शैलीमा आफ्नो मत बनाएर अगाडि बढेकोमा जाल नै फाटेपछि स्वार्थी कृष्णहरुको शरणमा माला जप्दैछन्। साथै कृष्णहरुले पनि पारिश्रमिक स्वरुप आइसीसीको डेलिगेटस आफैंले रोज्न पाउने शर्त तेर्स्याएको पनि पाइएको छ। अर्काहरु भने सेप्टेम्बरमा हुने भनिएको जनसम्पर्कको अधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन्।
३) यसपालि पनि परिचयपत्रको अनिवार्यता नगरेकोले ७०% मतदाताहरु प्रायोजित मतदाता भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। करिब २,२०० सदस्यहरु मागेको परिचयपत्र नबुझाएकै कारणले सदस्यता सूचीबाट हटाइएको छ। यदि सबैको यसरी नै विधानमा व्यवस्था भए अनुरुप परिचय पत्र मागेको भए सदस्य संख्या कति रहने हो भन्ने कुरा अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ।
४) यसपालिको चुनावी प्रचार विभिन्न गुट र उपगुटमा भएको देखिन्छ। एउटै गुट मात्रैलाई बोकेर हिँड्ने अवस्थामा अर्को गुटमा परेका र नपरेका राम्रा उम्मेदवारहरु समेत हार्ने देखिन्छ। साथै बढि मात्रामा प्रायोजित मतदाताहरु देखिएको कारणले एउटै गुटका उम्मेदवारहरु मात्र जित्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न। त्यसैले पनि होला प्रायः सबैजना उम्मेदवारहरु कुनै न कुनै झुण्डमा झुण्डिने प्रयास गर्दैछन्।
५) झण्डै ३ लाख नेपाली प्रवासी रहेको भनिएको अमेरिकामा १७,००० मात्रैले एनआरएनको सदस्यताका लागि आवेदन दिनु आफैंमा हार हो। यो भनेको सरदर ५% मात्रै हुन आउँछ। यसमा पनि स्वेच्छाले सदस्यता ग्रहण गरेका हरु ५,००० पनि नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै उम्मेदवार पनि नदिने दलालहरुले न्युयोर्क, टेक्सास, क्यालिफोर्निया लगायतका राज्यहरुमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका निमित्त भोटको पोकोहरु पनि जम्मा गरेको सुन्नमा आइन्छ।
एनआरएनलाई कसरी जिताउने?
खुसीको कुरा यसपालिको चुनावमा धेरै राम्रा उम्मेदवारहरु पनि चुनावको मैदानमा उत्रिनु भएको छ। केहि अनुभवी, सक्षम र सफल व्यक्तित्वहरु पनि मैदानमा छन्। ती उम्मेदवारहरु फरकफरक गुटहरुमा छन् भने कोही कुनै गुटमा पनि परेका छैनन्। कार्य समितिमा संस्थाको भलाइका निम्ति विद्रोह गरेर कारबाहीमा पर्ने देखि संस्थाको हितको लागि समय र स्रोत खर्चेर अदालत पुगेकाहरु पनि मैदानमा छन्। कार्य समितिमा बसेर सिन्को नभाँच्नेदेखि काम गर्न नसकेर अर्कालाई दोष दिनेहरु पनि मैदानमा छन्।
आफ्नो संस्थालाई नेपाली संस्था भन्न नरुचाउने, दुईतिहाइभन्दा बढीले अनुमोदित संबिधानलाई जलाएर नेपालको बदनाम गर्नेहरु पनि मैदानमा उत्रेका छन्। केही निष्ठावान रुपमा संस्थाका भलाइका लागि काम गरेकाहरु पनि छन्। तसर्थ यी सबैमध्ये कुनै धर्म, भाषा, राजनीतिक सोच भन्दा माथि उठेर हाम्रोलाईभन्दा पनि राम्रोलाई चुनेको खण्डमा मात्रै एनआरएनको जीत सुनिश्चित छ। अन्यथा एनआरएन अमेरिका पुन दुई वर्षका लागि वनबास जानेछ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २९, २०७४, ०१:११:१८